नेता, ब्यापारी र कर्मचारी को बढ्ता ढाँट्छन ? छुट्याउने तपाईंको काम …… « Gajureal
नेता, ब्यापारी र कर्मचारी को बढ्ता ढाँट्छन ? छुट्याउने तपाईंको काम ……
प्रकाशित मिति: १९ कार्तिक २०७५, सोमबार ०५:३४
*नेताहरु धेरै भाषण गर्छन । निरन्तरको प्रयासले मानिसलाई पारङ्गत बनाउछ भनिन्छ । तर गुलियो पनि धेरै खाए तितो हुन्छ भने झै भाषणमै जीवन बिताएका नेता पनि भाषण सक्ना साथ ढाँट्छन । श्रोताले हाई काढुन्जेल दुई घण्टा बोल्छन अनि मेरा दुई शब्द यहि टुङ्ग्याउछु भन्छन । यो ढाँट कुरा हैन र ?
*एउटा ब्यापारी दोकाने आफ्ना ग्राहकसँग अन्तिम सम्म बार्गेनिङ गर्दै भन्छ, नाफै छैन, आउदैन, हाम्रो परेकै मुल्य आएन आदी । तर यि सब ढाँट कुरा हुन, जब ग्राहक भैगो लिन्न भनेर हिडौं झै गर्छ अनि दोकानेले भन्छ- ल ल बोहनी भएको छैन, लैजानुस । सत्य कुरा भन्नु पर्थ्यो कि, मलाई नाफा पुग्दैन ।
*एउटा कर्मचारी सर्वसाधारण सेवाग्राहिलाइ ढाँट्न पटक पटक उद्धत रहन्छ । नयाँ र प्रक्रिया नबुझेको मानिस आयो कि तपाईको यो कागजात पुगेन उ चीज पुगेन, हाकिमसाब हुनुहुनन, ऐलेलाई बन्द भएको छ, म्याद सकियो आदि आदि । तर उसको मनासय सेवामुखी हुने हो भने उसैले सबै काम क्षणभरमै सम्पन्न गर्न सक्छ । जब सेवाग्राहिले टाउको कन्हाउदै आहील्यै गरिदिन आग्रह गर्दै , म पनि बिचार गरौला मात्र भन्ना साथ काम तुरुन्त हुन्छ । सत्य त उनले भन्नु पर्थ्यो, मलाई राज्यले दिएको तलव मात्रले पुग्दैन, अतिरिकत लाभ चाहन्छु ।
कोहि सधैँ जित्न ढाँट्ने, कोहि धेरै नाफा कमाउँन ढाँट्ने भने कोहि अदृश्य र अतिरिक्त कमाउन ढाँट्ने । आखिर सबै ढाँट त रहेछन् !